Momba anay - Nanjing Beyou Exrusion Machinery Co., Ltd.
Fanahin'ny orinasa: firaisankina, tolona, ​​fahamarinana ary fanavaozana.
Nanjing Beyou Extrusion Machines Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2017, izay mpanamboatra milina plastika sy plastika matihanina, indrindra amin'ny milina fitrandrahana plastika ho fototry ny fitaovana fanovana plastika sy ny haitao mifandraika amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana milina mpanampy.
Ny orinasanay dia manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina mahaleo tena, ampiarahina amin'ny fikarohana momba ny haitao sy ny fivoarana ary ny traikefa azo antoka amin'ny teknika, mampiditra teknolojia vaovao sy vokatra vaovao hatrany. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny extruder kambana, ny extruder tokana, ny tsipika famokarana horonantsary mpanelanelana PVB, ny tsipika famokarana thermoplastic fibre ary ny rafitra pelletizing anaty rano novolavolain'ny tena, izay be mpampiasa amin'ny karazana plastika sy rubber, toy ny fandokoana, fampifangaroana , famenoana, fanamafisana, fanendahana ary fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa isan-karazany dia afaka manome vahaolana sahaza ho an'ny mpanjifa izahay.
Ny velaran'ny tany dia 4000㎡ miaraka amin'ireo atrikasa mahazatra ao amin'ny distrikan'i Lishui. Misy mpiasa 30 mahery izao.
Ny orinasanay dia mitarika ny indostria na amin'ny rindrambaiko na fitaovana. Ankehitriny dia manana ekipa R&D avo lenta sy ekipa injeniera izay nirotsaka tamin'ny sehatry ny extruder kambana kambana nandritra ny taona maro. Izahay dia manana fitaovana fanodinana mandeha ho azy isan-karazany sy ivon-toerana fanandramana kalitao maoderina.
Beyou dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny famokarana extruder, serivisy iray ajanona！
Ny ampahany sy ny singa fototra ao amin'ny orinasa dia voahodina amin'ny alàlan'ny ivon-toeram-pamokarana CNC avo lenta ho an'ny dingana dingana lehibe, mitarika amin'ny famaritana ny ampahany sy ny indostrian'ny singa, ary mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Aorian'ny fidiran'ny akora amin'ny orinasa dia voafehy ao anaty sy vita avokoa ny fomba fanodinana rehetra.
Ny orinasanay dia manana fitaovana fanandramana manokana, ary miaraka amina karazana fitaovana fanandramana mandroso, hiantohana ny kalitaon'ny vokatra azo fehezina 100%.
Ny orinasanay dia mifanaraka tsara amin'ny fenitry ny rafitra kalitao sy fitantanana CE, drafitra kalitao feno ary fitantanana asa.